WEYER WORLDWA - Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.
1999 ụlọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala
2003 gbaara ISO9001 Quality Management System
2005 Guzobe ulo oru ulo oru ohuru na nke di elu
2008 Ngwaahịa anyị gafere UL, OA
2009 Ọnụ ahịa ahịa kwa afọ gafere 100 nde CNY maka oge mbụ
2013 E webatara SAP Sistem, ụlọ ọrụ ahụ banyere oge ọhụụ nke njikwa usoro
2014 Onyinye teknụzụ dị elu na ngwaahịa ndị ama ama
2015 Enweta IATF16949 Asambodo sistemụ; ndibọhọ aha nke "Shanghai Famous Brand" na "Obere Teknụzụ Giant"
2016 Emechara mgbanwe mgbanwe na atụmatụ iji depụta. Weyer nkenke Technology (Shanghai) Co., Ltd. e guzobere.
2017 Onyinye Shanghai Civilization Unit; Ngwaahịa anyị agafeela ATEX & IECEX
2018 DNV.GL Asambodo Society Asambodo; Ejiri Weyer Precision rụọ ọrụ
2019 Afọ iri abụọ nke WEYER
N'ịbụ onye guzosiri ike na 1999, Shanghai Weyer Electric Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ọkachamara na mmepụta nke eriri glands, tubing na akwa tubing, eriri USB na njikọ nkwụnye. Anyị bụ ndị na-eweta ihe nchekwa sistemụ nchekwa, na-echebe eriri n'ọhịa dị ka ụgbọ ala ike ọhụrụ, ụgbọ okporo ígwè, akụrụngwa aerospace, robot, akụrụngwa ike ikuku, akụrụngwa akụrụngwa, igwe ihe eji arụ ọrụ, nrụnye eletriki, ọkụ, mbuli elu, wdg Ahụmahụ 20 afọ maka usoro nchebe USB, WEYER emeriwo aha ndị ahịa na ndị ọrụ njedebe n'ụlọ na mba ọzọ.
Ogo bụ ihe dị mkpa na nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ WEYER. Anyị nwere otu oru oma njikwa njikwa otu na-anwale kwa oge na enweghị usoro ngwaahịa na ụlọ nyocha mba ụwa anyị. Anyị na-ekwe nkwa ogo ngwaahịa anyị n'okpuru iji ya eme ihe ma na-eweta ọrụ ngwa ngwa maka mmezi ngwaahịa. Anyị mma management na-gbaara dị ka ISO9001 & IATF16949.
Teknụzụ na-eduga n'ihe ọhụrụ. Anyị na-aga n'ihu na-azụlite ma na-etinye ego na mbibi, mmepụta ọhụụ, igwe na teknụzụ. Anyị nwere ndị otu R & D siri ike iji mepụta ihe ọhụụ ọhụụ iji nyere aka mee ka ndị ọrụ njedebe chebe nchekwa eriri ma gbakwunye uru na akụ na ụba. Anyị nwekwara a ọkachamara ebu otu iji kwalite anyị ebu Ọdịdị iji ọhụrụ ebu technology maka rụọ àgwà nke ngwaahịa na mbenata ya na-eri.
Weyer nwere echiche dị elu: gbalịsie ike iji nye ndị ahịa ọrụ dị iche iche, akara na ngwa ngwa. Weyer na-enye ihe ngwọta kacha mma maka oru ahụ iji mee usoro nchebe zuru oke. Weyer na-anapụta oge niile iji zute ihe ndị ahịa chọrọ. Weyer na-enye ọrụ mgbe niile arụ ọrụ nke ọma maka ntinye na ndozi.
1. Ọgwụ Igwe
2. Ogige Nri Ihe
3. Igwe nhazi igwe
4. Igwe eji ebu ihe
5. Ebe Nchekwa
6. Ebe Nchekwa 2